Ingabe i-Amazon ingakwazi ukusinda ekuguqukeni kwesimo sezulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Amazon ingenye yezindawo ezibaluleke kakhulu emhlabeni, uma kungeyona ebaluleke kakhulu, empilweni. Ihlala ehlathini elikhulu kunawo wonke emhlabeni, izitshalo usuku nosuku zimunca isikhutha futhi zikhiphe umoya-mpilo, igesi esiyidinga kakhulu ukuze siqhubeke siphila. Kepha, Ingabe ingasinda ekuguqukeni kwesimo sezulu?
Emashumini eminyaka amuva nje, ukuqothulwa kwamahlathi kwenziwa ngokushesha okukhulu. Ukwanda kwesibalo sabantu kusho ukuthi kwakhiwa imigwaqo nezinsimu zezolimo ziyakhiwa endaweni kuze kube muva nje ebingeyomvelo. Kepha, ngaphezu kwalokho, njengoba iplanethi ifudumala, umbuso wemvula uyashintsha, ubeka izitshalo engcupheni.
Ngenyanga ka-Ephreli izimvula zazinamandla kangangokuba zadala umonakalo omkhulu: akugcini ngokugcwala imifula iMulato, iMocoa neSangucayo (UMnyango wePutumayo, eColombia) okwenza abantu abangama-300 balahlekelwe yizimpilo zabo, kodwa sebeshiye imindeni eyizinkulungwane ezingama-30 ingenakudla izinyanga eziyisithupha Ngoba ukuqoqwa kwenathi ye-Amazon kwehle ngo-80%, ngokusho kuka-Analiz Vergara, kusukela ku-Amazon Coordination Unit (WWF LAC) kuya I-Green Efe.
Lezi ziqephu zingenzeka kaningi kakhulu ngokuzayo, yize kungezona kuphela. Izinga lokushisa e-Amazon kulindeleke ukuthi likhuphuke ngo-3ºC ngasekupheleni kwekhulu leminyaka, okuzodala ushintsho kumjikelezo olawula isimo sezulu saseNingizimu Melika. Imiphumela miningi: ukuphela kwezinhlobo, ukwanda kwemililo yehlathi, isomiso nezikhukhula.
Ingabe i-Amazon izosinda ekushintsheni kwesimo sezulu? Kuya ngomuntu. Uma igcinwe kahle, ngeke ibe nezinkinga, kepha uma iqhubeka nokugawulwa kwamahlathi, kungenzeka ukuthi ibe nenkinga enkulu yokuthola kabusha umonakalo esiwenzile nasenza kuwo.
Uma sinaka ukuthi leli hlathi lingelinye lalawo anikeza impilo kithi sonke, kubalulekile kakhulu ukuthatha izinyathelo zokulilondoloza.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ingabe i-Amazon ingakwazi ukusinda ekuguqukeni kwesimo sezulu?